Rafi-pitatitra (miloko manga) ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina
FIRY ny atidohanao? Tsy diso ianao raha mamaly hoe “iray.” Tsy ao amin’ny atidohanao ihany anefa no misy rafi-pitatitra. Misy selam-pitatitra be dia be mifandray koa ao amin’ny vatanao, ka nantsoin’ny mpahay siansa sasany hoe “atidoha faharoa.” Ao amin’ny kibonao no misy ny ankamaroan’io rafi-pitatitra io, fa tsy ao amin’ny lohanao.
Mila miara-miasa tsara sy miezaka be ny vatana vao afaka mamadika ny sakafo ho lasa otrikaina. Mety tsara àry raha mizara andraikitra ny atidoha, ka ilay rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina no avelany hiandraikitra ny fandevonana sakafo.
Tsotra kokoa io rafi-pitatitra io raha oharina amin’ny rafi-pitatitra ao amin’ny atidoha. Tena be pitsiny anefa izy io. Tombanana ho 200 ka hatramin’ny 600 tapitrisa ny selam-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina. Mino ny mpahay siansa fa hifanizina be ny selam-pitatitra ao amin’ny atidoha, raha mbola izy io koa no manao ny asan’ilay rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina. Milaza ny boky Ny Atidoha Faharoa (anglisy) fa “tsara kokoa sady tsy hampidi-doza raha [io taova io] ihany no avela hanao ny asany.”
TOERANA IFANGAROAN’NY ZAVATRA SIMIKA
Misy zavatra simika maromaro tsy maintsy mifangaro tsara ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina, vao mahalevona sakafo isika. Mila miforona ara-potoana izy ireny, ary mila tonga any amin’ny toerana ilana azy. Be pitsiny ilay izy ka tena mahavariana. Misy sela manokana, ohatra, ao amin’ny rindrin-tsinay, ary izy ireo no mamantatra an’izay zavatra simika ao amin’ny sakafo nohaninao. Izany no ahafantaran’ny rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina hoe inona no anzima ilaina mba hamadihana an’ilay sakafo ho lasa zavatra ilain’ny vatana. Io rafi-pitatitra io koa no mijery hoe marikivy na manana tsiro hafa ilay sakafo. Ataony mifanaraka amin’izay avy eo ny anzima ilaina.
Mahagaga ny fomba andehanan’ny sakafo ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina. Ny ‘atidohanao faharoa’ no tena mandrindra an’izany. Ahetsiny ny hozatra eo amin’ny taovam-pandevonan-kanina mba hahafahan’ny sakafo mandeha ao amin’izy io. Ilay rafi-pitatitra no mandrindra hoe impiry ireny hozatra ireny no ahetsika, ary atao mafimafy sa moramora.
Izy io koa no manara-maso sao misy bakteria mankarary ny sakafo hanintsika. Tsy mahagaga àry raha ao amin’ny kibonao no misy ny 70 ka hatramin’ny 80 isan-jaton’ireo sela tena ilain’ny hery fanefitra! Raha feno mikraoba mankarary ny sakafo nohaninao, dia ataon’ilay rafi-pitatitra izay hanetsehana mafy an’ireo hozatra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina. Amin’izay ianao mandoa na mivalana ka mivoaka ilay poizina.
Miara-miasa foana amin’ny atidoha ny rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina, na dia hoatran’ny hoe mahaleo tena aza. Anisan’ny mamaritra ny habetsahan’ny hormonina mandefa hafatra any amin’ny atidoha, ohatra, izy io hoe efa mila misakafo ianao, ary hoatran’ny ahoana ny sakafo sahaza anao. Ny selam-pitatitra ao amin’izy io no mampahafantatra ny atidoha hoe efa voky ianao, ary mety hataony izay hahatonga anao ho te handoa raha be loatra ny sakafo laninao.
Na mbola tsy namaky an’ity lahatsoratra ity aza ianao, dia angamba efa nahita hoe mifandray ny taovam-pandevonan-kanina sy ny atidoha. Tsikaritrao ve, ohatra, hoe lasa faly kokoa ianao rehefa mihinana sakafo sasany? Hitan’ny mpikaroka fa mandefa ‘hafatra’ any amin’ny atidoha ny rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina, ka iny ‘hafatra’ iny no mahatonga anao ho faly sy hahazo aina. Izany angamba no antony ihinanan’ny olona zavatra mamy rehefa miady saina izy. Te hanampy an’ireo olona kivy be ny mpahay siansa, ka mitady hevitra mba hahatonga an’ilay rafi-pitatitra handefa an’ilay hafatra.
Mety hisy fotoana koa ianao matahotra na mitebiteby, ka mety hahatsiaro hafahafa any anatinao any. Avilin’ny ‘atidohanao faharoa’ hiala ao amin’ny vavoninao mantsy ny ra mandalo ao rehefa miady saina ianao. Mety haloiloy koa ianao, satria ataon’ny atidoha izay hahatonga ny rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kaninao hanetsiketsika be an’ireo hozatra ao amin’izy io.
Na dia antsoina hoe “atidoha faharoa” aza ny rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kanina, dia tsy afaka mieritreritra eo amin’ny toeranao na hanampy anao hanapa-kevitra. Tsy afaka manampy anao hamoron-kira izy io, na hitantam-bola, na hanao entimody. Mbola mahavariana ny mpahay siansa foana anefa izy io satria be pitsiny. Mbola betsaka aza ny zavatra tsy fantatr’izy ireo. Rehefa hisakafo àry ianao dia saintsaino kely aloha ny asa ataon’ny rafi-pitatitra ao amin’ny taovam-pandevonan-kaninao. Kely sisa izy dia hanomboka hanara-maso sy handrindra ny zava-mitranga ao, hanao zavatra mifanaraka amin’ny toromarika azony, ary hifandray amin’ny atidoha.
Hizara Hizara Manana Atidoha Anankiroa ve Ianao?
g17 No. 3 p. 10-11